We Fight We Win. -- " More than Media ": စစ်အစိုးရ အဆက်ဆက် ခိုးယူပြီး၊ တရားမ၀င်၊ ဥပဒေမဲ့ အကျင့်ပျက်ခြစားခဲ့တဲ့ အိမ်ယာမြေရောင်းဝယ်မှုတွေအပေါ် ဘယ်လို တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းသင့်သလဲ? အပိုင်း (၃)
စစ်အစိုးရ အဆက်ဆက် ခိုးယူပြီး၊ တရားမ၀င်၊ ဥပဒေမဲ့ အကျင့်ပျက်ခြစားခဲ့တဲ့ အိမ်ယာမြေရောင်းဝယ်မှုတွေအပေါ် ဘယ်လို တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းသင့်သလဲ? အပိုင်း (၃)
This Leaked doc is still unverified but I believe that is going to happen very soon.
Leaked Puppet Thein Sein’s government documents plans to ignite violence in Rakhine state.
6 April 2014 at 14:34